Fitantanana ny firenena: niala ihany Rajaonarimampianina | NewsMada
Fitantanana ny firenena: niala ihany Rajaonarimampianina
Nifarana mialoha ny fotoana ny fitantanan’ny filoha Rajaonarimampianina ny firenena. Tsy azo nihodivirana ny nametrahany fialana, araka ny voalazan’ny lalàna. Ho mpifaninana tanteraka amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany… Afa-doza ny vahoaka malagasy ?
Tsy hisy hampiesona na hievotrevotra intsony manomboka izao ary tanteraka ihany izany ny “Miala Rajao”. Nanambara ny fametraham-pialany, nialohavan’ny taratasy milaza izany napetraka eny amin’ny HCC, omaly tolakandro, ny kandidà Rajaonarimampianina. Resabe efa mahazatra fotsiny sy miverimberina sisa nataony tamin’ny lahateny ho an’ny firenena, natao teny Iavoloha, omaly alina. Niala ihany ny tenany. Feno amin’ny alahady izao ny 60 andro mialoha ny fifidianana, hatao ny 7 novambra izao, tsy maintsy hametrahany fialana. Anisan’ny anton’izao fialany izao ny fitakian’ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny 13 mey sy ny depiote 73 noho ny fanitsakitsahana lalàmpanorenana nataony. Nitory teny amin’ny HCC
ny depioten’ny fanovana. Mazava ny didy fa haroso mialoha ny fifidianana. Nirotsaka hofidina Rajaonarimampianina ka tsy maintsy miala, noho izany. Hisolo toerana vonjimaika azy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo.
Hangorona entana sy handao an’Iavoloha avy hatrany izany ity kandidàn’ny HVM ity ary hiverina amin’ny tranony etsy Tsimbazaza. Ho mpifaninana amin’ny fifidianana manomboka izao, saingy tsy afaka mampiasa ny fitaovam-panjakana intsony amin’izany.
Fitondrana nampahantra vahoaka
Maro ireo mpitondra nifandimby teto fa tsy nisy tahaka ity fitondrana Rajaonarimampianina ity. Nihanaka ny kolikoly eto amin’ny firenena, nanomboka tany amin’ireo olobe tao an-dapa sy ny manodidina ny fitondrana. Ohatra, ny “Raharaha Claudine”. Ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fanjakan’ny tsimatimanota na ireo lasa mpanefoefo tampoka tamin’izao fitondrana izao. Niakatra hatrany ny vidim-piainana. Nitotongana ny vola ariary : 4 000 Ar ny euro. Tsy voafehy ny fiakaran’ny vidin-tsolika. Hatramin’izao, mbola mahazo vahana ny delestazy any rehetra any. Manampy trotraka ireo ny tsy filaminana sy tsy fandriampahalemana. Asan-dahalo sy jiolahy miaraka amin’ny fakana an-keriny ary ny fitsaram-bahoaka. Ireo olana miverimberina eny amin’ny oniversite sy ny fitakiana sendikaly. Teo koa ireo raharaha rehetra tsy mazava hatramin’izao. Anisan’izany ny ra mandriaka tetsy Anosy sy teny Mahamasina vokatry ny baomba. Ny “Villa Elisabeth”, ny any Antsakabary, ny “Raharahan’Anjororobe”, ny olan’ny fananan-tany…
Araka izany, anjaran’ny vahoaka mpifidy ny mandinika sy mijery ny efa-taona niainana ny fahantrana lalina, niaraka amin-dRajaonarimampianina.